Chelsea oo guul gaartay 12 kulan oo xiriir ah horyaalka, Eden Hazard oo 50 gool buuxsaday iyo RIKOODHADII kale ee laga diiwaan geliyey guushii ay Blues ka gaartay Bournemouth – Gool FM
Chelsea oo guul gaartay 12 kulan oo xiriir ah horyaalka, Eden Hazard oo 50 gool buuxsaday iyo RIKOODHADII kale ee laga diiwaan geliyey guushii ay Blues ka gaartay Bournemouth
(London) 26 Dis 2016 – Kooxda kubadda cagta Chelsea ayaa garoonkeeda Stamford Bridge ku garaacday naadiga Bournemouth kulan ka tirsan horyaalka Premier League, waxaana ay uga badisay 3-0.
Labo ka mid ah goolashaas waxaa Blues u dhaliyey Pedro, halka goolka kale uu ahaa rigoore uu u saxiixay Eden Hazard.
>- Chelsea ayaa guul gaartay 12 kulan oo xiriir ah kulamada horyaalka markeedii ugu horreysay taariikhdeeda.
>- Cesc Fabregas ayaa labo caawin ka xigtaa inuu 100 gool caawiyo Premier League, isla markaana taariikh ka sameeyo tartankan, kaliyana Wayne Rooney, Frank Lampard iyo Ryan Giggs ayaana caawin ka badan sameeyey xiddigan.
>- Eden Hazard ayaa noqday ciyaaryahankii lixaad ee Chelsea 50 gool ugu dhaliya Premier League, xiddigaha kalena waa Frank Lampard, Didier Drogba, Jimmy-Floyd Hasselbaink, Gianfranco Zola iyo Eidur Gudjohnsen.
>- Pedro ayaa ka qeyb qaatay sagaal gool, afar gool waa uu dhaliyey halka 5 gool oo kale uu caawiye ka ahaa sagaal kulan oo uu horyaalka ciyaaray xilli ciyaareedkan.
>- Kooxda Chelsea lama garaacin 12-kii kulan ee ugu dambeeyey oo ay ciyaartay Boxing Day-ga, 7 kulan guul ayey gaartay, halka 5 kulan oo kale ay barbaro gashay.
>- Eden Hazard ayaa dhaliyey 50 gool Premier League, kaliya xiddiga khadka dhexe ee kaga dhaqsiyo badnaa ama kulamo yar kaga hor gaaray goolashaas waa Robert Pires.
EPL: Kooxda Arsenal oo guul soo daahday ka gaartay West Brom, iyadoo geesiga Gunners ee kulankan uu ahaa Olivier Giroud iyo kulamadii kale ee la ciyaaray horyaalka… + SAWIRRO
EPL: Man City oo guul ka soo gaartay kooxda Hull City kulankeeda koowaad ee Boxing Day, iyadoo soo degtay kaalinta labaad ee kala sarreynta horyaalka… + SAWIRRO